site ha na 18-05-02
The swiss CNC igwe bụ nkenke nhazi akụrụngwa, na ọ nwere ike mezue mgbagwoju machining nke ụgbọala,-egwe ọka, mkpọpu ala, na-agwụ ike, atụ na atụ ihe n'otu oge. Ọ na-bụ-eji maka ogbe nhazi nke nkenke ngwaike na aro pụrụ iche ekara-abụghị ọkọlọtọ akụkụ. Bec ...
Olee otú a obere space akara ije igwe na-arụ ọrụ?
Ọtụtụ ndị mmadụ maara ihe na nzuzo na usoro nke obere CNC eje ije igwe, ma ụkpụrụ nke CNC eje ije igwe abụghị doro nnọọ anya. Iji nyere gị aka mma ghọta mkpa ihe ọmụma, ga-amasị m na-enye gị a dị nkenke iwebata taa. Bụ ụkpụrụ nke obere numer ...
The ọhụrụ CNC igwe ngwá ọrụ azụmahịa netwọk ike iso Anyka docking Internet Era
N'oge gara aga afọ iri abụọ nke commercialization, Internet technology e dere ihe na-enwetụbeghị ụdị ọnụego nke na-agbanwe agbanwe ụwa ulo oru akụkọ entrepreneurial ndụ. Na ngwa mmepe nke Internet taa, "Internet plus" aghọwo ọhụrụ nkịtị mmepe nke nke ...
New atụmatụ: ọhụrụ Ankai Ankai ịkpachapụ ịkpachapụ NC iwebata mba ọzọ technology, ọkachamara na mmepụta nke elu-ọgwụgwụ CNC igwe ngwaahịa na-aga, elu rigidity, ezi kwụsie 1, elu rigidity: dum igwe bụ ubé arọ, nke na-gụnyere aru mgbatị mgbidi thicknes ...
The ọhụrụ SC385 SM203 igwe, Ankai ọma gafere Provincial Department nke sayensị na nkà na ụzụ njirimara!
August 25, 2012 Shandong n'ógbè sayensị na Technology Department of Shandong University na ìgwè ndị ọkachamara na-eleta anyị ụlọ ọrụ, ka a mata anyị ụlọ ọrụ SC385, SM203 CNC Swiss ụdị lathe-egwe ọka mgbagwoju igwe, ọkachamara otu na m ụlọ ọrụ onwe R & D ngwaahịa enye a elu eval ...